Dr Khin Maung Win - Shwe Yi Win: မေလအမှတ်တရ တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
အမှတ် ၂၅၆ အတွေးအမြင် ၂၀၁၃ ဇူလိုင်
"ကမ္ဘာသမိုင်း တစ်ခေတ်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နပိုလီယံဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ သူက မေလမှာ မွေးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုဝါတာလူးစစ်ပွဲမှာ အပြတ်အသက်နိုင်လိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီး ၀ယ်လင်တန်ဆိုတာ မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့လူပေါ့" လို့ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်အဲဒီဆောင်းပါမှာ အခုလို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
"ရယ်စရာရေးတိုင်း၊ ရယ်စရာတွေ ပြောနေတိုင်း ပျော်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ 'မရှိလို့ ပေါ်တဲ့ သွားတောင်ရယ်သမား မေးကြရှာကြတယ်' ဆိုတဲ့ ဦးပုညရဲ့ စကားလို ငိုချင်လေလေ၊ ရယ်စရာတွေ ရှာဖွေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကလိထိုးရယ်နေတာလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်"
"အဲလေ. . . သေတယ်ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး။ ကြောက်စရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မသေချင်တာတစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်တွေ လုပ်ချင်သေးတယ်၊ ဘယ်စာတွေ ရေးချင်သေးတယ်။ ဒါတွေ ရေးပြီး၊ လုပ်ပြီးမှ သေချင်သေးတာပေါ့။ အဲဒီလို တွေးတတ်တယ်။ အဲဒီ အတွေးအခေါ်ကလည်း တကယ်တော့ သိပ်ပြီးမညင်းသာပါဘူးထင်တယ်"
"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတာ လုပ်ချင်တာတာတွေ ဘယ်တော့မှ လုပ်ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေးရှေးဘ၀ အဆက်ဆက်ကလည်း လုပ်လာခဲ့တာ မပြီးခဲ့ဘူး။ ခုဘ၀လည်း ပြီးဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဘ၀ ဆက်လုပ်လည်း မပြီးပါဘူး။ အဲသလိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်ဆုံးမပြီး အေးချမ်းမှု ရှာရတော့တာပဲ။ ဒါမှလည်း လောကဓံကို သည်ခံနိုင်တယ်"
"အဲလေ. . . ပုထုဇဉ်သားဆိုတော့လည်း ခန္တီ-သည်းခံခြင်းတရားကို ခန္တီစ-မနိုင်၍ သည်းခံခြင်းသည် လည်းကောင်း ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းရတော့တာပေါ့။ မနိုင်လို့ သည်ခံတရား လက်ကိုင်ထားပါမှပေါ့။ မနိုင်မှ မနိုင်တာ သည်မခံလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။“
မေမေ ၁၉၈၂ ၊ ဇွန်လထုတ် သောင်းပြောင်းထွေလာ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ထဲက အမှတ်တရ ကူးမိတာပါ။ မေမေနဲ့အတူ ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ဖတ်ချင်စဖွယ်ရေးခဲ့တဲ့ ဦးလေးသော်တာဆွေ၊ (ဦး)ထင်လင်း၊ ကိုသုမောင်၊ ကိုဝဏ၊ ဦးစိန်ခင်မောင်ရီ၊ ဦးသော်ကတို့ရဲ့ စာတွေကို အမှတ်ရမိနေပါတယ်။ ဦးသာဓုလည်း ဒီလိုမျိုး ရေးခဲ့ပါတယ်။
မေမေနဲ့ ဘဘ WPD သတင်းစာမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာတော့ ဧည့်ခံပွဲတွေမှာ တွေ့ကြ တာတွေ ပြောပြဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ခြင်းပဲ မေတ္တာရောက်နေတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမှာ နှုတ်ခွန်းဆက်ကပ်ပြားပို့တာ မှတ်မိပါတယ်။ မေမေနဲ့ဘဘက အမှတ်တရ ပြောနေတတ်လို့ သိနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဒေါက်တာမောင်မောင်းရဲ့ သက်ရှိရာဇ၀င် ဆောင်းပါးမှာဖြည့် ရေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီလို ဖြည့်ရေးဖို့ဖြစ်လာတာ ဦးလေး ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်) ပြောပြလို့သိရတာပါ။ ဆောင်းပါး ရေးစဉ်က စာအုပ်နှစ်အုပ်စလုံး သေသေချာချာဖတ်ပြီးရေးတာ မျက်စိမှောက်သွားလို့ပါပဲ
name dropping ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ name ဆိုတဲ့ (အမည်) နဲ့ dropping ဆိုတဲ့ (ပစ်ချခြင်း) ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်ခုကို ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီစကားလုံးကို တိုက်ရိုက် t"dyÜm,် ဖွင့်ရင်အမည် တွေကို ပစ်ချခြင်းလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ စကားပရိယာယ် idiom အရ အဲဒီဝေါဟာရဟာ လူအထင်ကြီးစေတဲ့ နာမည်တွေကို လူရှေ့၊ သူရှေ့မှာပြောဆိုတာကို ဆိုလိုတယ်။ ဥပမာ-အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျောင်းနေဖက်ဖြစ်ဖူးတယ်၊ သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့တယ် စတာတွေဟာ name dropping ရဲ့ ဥပမာ တွေဖြစ်တယ်။
Posted by Junior Win at 8:54 PM